Indlu yakudala iSammommé
Indlu yakudala eyeyeyokuqala kunye neyona ndlu yakudala yaseSammommè. Ibuyiselwe ngokupheleleyo kwisitayile sakudala, isagcina iimpahla zakudala kunye neengcango zangaphambili zendlu endala. Amagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi elinye elineebhedi ezinkulu, amagumbi okuhlambela amabini aneshawari, elinye linebhafu. Ikhitshi elisebenzayo nelisebenzayo lamatye, isitovu, i-oveni, isitya sokuhlamba izitya, kunye nesinxibo esibanzi. Igumbi lokutyela elinetafile ukuya kwizihlalo ezili-12 kunye neziko. Igadi enetafile enezihlalo ezi-6.
Indlu ibonakaliswe ngeempawu zakudala kunye neempawu, iisilingi ezenziwe ngomthi, kunye ne-arches yezitena ezibonwayo. Ezinye iingcango ziyi-original kwi-1800's, imigangatho ye-terracotta yaseTuscan yimpawu zexesha. Umoya uzolile kwaye umoya osendulini uyahlaziya.
Ilali yaseSavaiana yiSammommè, eyona dolophu indala kunye neyona dolophu indala kule ndawo, ephawulwe ngamatyholo kunye nee-arches. Indawo yokuhlambela endala enomthombo wamanzi okusela ikuvumela ukuba ucinge ngezingqisho zakudala zexesha elidlulileyo.
Idolophana yaseSammommè ixhotyiswe ngebala elikhulu lokudlala labantwana, kwaye kwisikwere kukho ibha, ivenkile yokutya, icawa, ibala lebhola, kunye nepaki yemoto enkulu.
Ndihlala ndifumaneka ngefowuni, emntwini kuphela xa kufuneka, kwaye kwezinye izicelo kukho abadibanisi abakhoyo.